Sida loo Download VirtualDub MPEG2 iyo cadaadi MPEG2 Videos
> Resource > Video > Download VirtualDub MPEG2 & Isticmaal ku cadaadisaa Videos MPEG2
VirtualDub waa video qalab qabashada / processing lacag la'aan ah dhufto ee Windows (2000 / XP / Vista / 7). Iyo VirtualDub MPEG-2 waa version ah modified ee VirtualDub taageera MPEG-2 dejinta asal ahaan. Si kastaba ha ahaatee, sida uu qoraagu yiri "software Tani waa huriye oo mar dambe la updated Wixii MPEG-2 iyo taageero wmv ee ugu dambeeyay VirtualDub ah, isku day in aan plugins (MPEG-2 plugin for VirtualDub 1.8.1 ama ka sarreeya - by editor). ".
Download iyo rakib VirtualDub MPEG-2
Waxaad laga yaabaa inuu soo bixi VirtualDub MPEG-2 halkan iyo Macdan files si gal ah. Hadda waxaad ka heli software video processing la MPEG-2 video dejinta taageeray. Si aad u ordaan VirtualDub MPEG-2, double guji VirtualDub.exe ah.
Sida loo isticmaalo VirtualDub MPEG-2 ku cadaadisaa waaweyn MPEG-2 Videos
VirtualDub-MPEG2 waxaa loogu talagalay in la MPEG2 video, sida ay muujinayso Digital TV, DVD files un-Windows XP (* .vob) iyo kuwaas video files shaqeeyaan sida caadiga ah ee size weyn yihiin. Hadda waxaad iyaga cadaadin karaa iyadoo la isticmaalayo VirtualDub MPEG-2.
VirtualDub MPEG-2 Tutorial Tallaabo 1: Calan Video riixo
Fur aad MPEG-2 video file dhex File / Open file video ..., ka dibna tag Video / riixo inay soo qaadaan wada hadal soo socda.
Sida kor ku xusan, dooro XVID MPEG-4 codec iyo button reserved riix si aad u samaysaa saldhigyo Xvid.
Fiiro gaar ah: Haddii riixo waa Disable, bedesho hab processing Full ugu horeysay ee menu Video ah.
VirtualDub MPEG-2 Tutorial # 2: Calan Audio riixo
Mudanayaasha riixo Audio la mid tahay video riixo, u tag Audio / hab processing Full, oo mar kale Audio / riixo in la furo wada hadal ah, halkaas oo MPEG lakabka-3 ayaa lagu talinayaa.
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u bilaabaan hawsha video, halkan waa sida:
1. Tag Menu File
2. Dooro sida AVI Save ...
3. Dooro meesha aad rabto in lagu badbaadiyo AVI iyo u magacaabo.
4. Riix Save.
The VirtualDub MPEG-2 wuxuu u baahan yahay qaar ka mid ah waqtiga ku cadaadisaa aad video. The ka weyn file video yahay, dheer. Laakiin VirtualDub MPEG2 waa video processing software oo degdeg ah. Qaado koob bun ah oo aad nasato. Marka la dhammeeyayna, isticmaasho ciyaaryahanka video jecel yahay in uu arko natiijada compressing ah.
Haddii aadan jeclaan VirtualDub MPEG-2 oo aad jeclaan lahayd in la helo qaar ka mid ah tifaftirayaasha oo awood badan, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , taas oo ay taageertaa Windows iyo OS Mac la waafaqsan sare ah iyo wixii soo baxayey qaabab. Interface Wizard-style iyo design dareen kaa caawin doona inaad ku cadaadisaa video ama hawl kasta oo kale oo tafatir si fudud oo si habsami leh. Isku day inaad maanta soo degsado version maxkamad free hoos ku qoran.
ASF Editor: Sida loo Edit ASF Video Files